Ndị ọrụ ArcView 3x hụrụ GvSIG - Geofumadas n'anya
Septemba, 2008 ArcGIS-ESRI, GvSIG
Taa, anọ m n'ụlọ ọrụ nke mmepụta ihe osise, nke ndị mụtaụrụ nke ọma na programmụ na Avenue, ebumnuche mbido bụ igosipụta usoro ndị ọzọ na-apụ n'anya ArcView 3x na mmachi nke ịkwaga ArcGIS 9.
Ọ ga-esiri ya ike ma ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ Geomedia ntụle ọ gaara adị ọtụtụ, ma ọ bụ na ha nwere ọlaọcha ma nwee ike inweta ArcGIS ma ọ bụ ọnụ ala ngwa ngwa ngwa ngwa. Na nkeji ole na ole ikpughe ha ejirila afọ ojuju na uru nke GvSIG; Ugbu a, m na-achikota ihe m chere mere emeela ka ikwenye gị:
1. Ọ dị ka ArcView na AutoCAD
Eziokwu ahụ bụ na GvSIG yiri ArcView 3x na ntanetị ya dabere na echiche, tebụl na nhazi dị iche iche. Mgbe ahụ hụ na ụzọ iji wuo data na myirịta na AutoCAD, yana iwu ndezi zuru ezu emetụtala; N'ezie, anyị maara na ndị ọrụ ArcView 3x na-akatọ oke nsogbu na-edezi data n'ụzọ ziri ezi na enweghị topology.
2. Ọ bụ n'efu, ma ọ bụ ihe fọrọ nke nta
Okwu ziri ezi bụ n'efu iji ya, agbanyeghị etu ha siri hụ ya bụ na kesaa ya enweghị mkpa ịzụta ikikere. Institutionlọ ọrụ a mepụtara ụfọdụ atụmatụ na Avenue, ha na-atụlekwa ohere nke ịkwaga na ArcGIS 9, ihe na-eme bụ na maka ndị ọrụ nke ngwa ha o siri ike inweta ụdị ikike a ... ọkachasị ebe ha bụ ndị obere ego.
N'ezie, maka nke a ekwere m nkwa inye gị GvSIG N'ezie akpọrọ "GvSIG maka ndị ọrụ ArcView" ... Echere m na ọ ga-atọ ụtọ.
inweta ArcGIS, ArcGIS Engine, ArcObjects, Gis Server, na ArcSDE furu ha ihe ruru $ 57,000. Ugbu a, ha ga - etinye naanị $ 2,000 na Java, $ 1,000 na usoro GvSIG na $ 2,000 na mmepe nke ezigbo akwụkwọ ntuziaka ... Ọ bụghị n'efu, mana ọ ga - efu $ 5,000 naanị n'ihi na ha nwere ndị mmemme na - ejikwa Java ma mara na anya ha mechiri ojiji nke Uzochi
3. Njikọ ọnụ ọgụgụ dị iche iche
Mgbe emepụtara ya na Java, ọ na-agbanye na Mac na Linux, ọ pụtara na ha ga-akwụsị ịta ahụhụ na mkpọsa ọrụ na-akwado sistemụ ha na-eche imezu.
Maka ugbu a, a na-eme mkpebi ahụ, ha ga-eme naanị atụmatụ ọrụ nke gosipụtara ọkwa nke ọzụzụ, mmepe na mmejuputa ụdị ọhụrụ nke sistemụ ha. Nke kachasị mma, ha nwere olile anya ịhazi ahụmịhe ahụ na ọkwa.
Yabụ ee, ndị ọrụ ArcView dịka GvSIG. Ọnwa abụọ site na na-anwale, arụpụtalarị ihe.
N'ebe ahụ ka m na-agwa gị otu m si bụrụ.
Previous Post«Previous Ógbè na Akụrụngwa na Madrid
Next Post Otu esi ejikọ GVSIG na Gif GifNext »
4 Na-aza "Ndị ọrụ ArcView 3x hụrụ GvSIG n'anya"
Kale kwuru, sị:
gvSIG abụghị n'efu, ma ọ bụ ụfọdụ nchịkwa ọha na eze na-akwụ ụtụ isi anyị.
Ihe a na-anabataghị bụ na ngwanrọ nke etinyela nnukwu ego na oge wee gbue na ngwanrọ na-asọmpi (gụọ qGIS ma ọ bụ ihe yiri ya). Na ihe niile n'ihi '' omenala 'nke Spanish nke ime ihe niile site na ọkọlọtọ, na-akọghị ọtụtụ ihe emere na obodo (dịka GRASS dịka ọmụmaatụ).
Ọ dị mfe, yana ego ọha. Ole ole n'ime ụlọ ọrụ ndị a na-emekọrịta na gvSIG (ịhapụ IVER, prodevelop na ndị ọzọ), na-eme ya dịka ego ma ọ dịghị ebu ihe ọ bụla n'ezie?
Ekwenyesiri m ike na ị ga-agwa gị ...
Jorge Gaspar Sanz Salinas kwuru, sị:
Iche na software a n'efu bụ otu n'ime ihe ndị kachasị emetụta nke nwere ike ime gburugburu SL. Ọ bụrụ na ndị na-otú ahụ, m ga-afọ abụọ bi oxygen m eku ume dị ka ukwuu nke ọrụ m nkwa bụ maka gvSIG oru ngo na o doro anya na m bosses-adịghị dị ka philanthropic. Nke ahụ bụ, gvSIG na ọtụtụ ndị ọzọ na oru ngo ndụ SL oru na ụlọ ọrụ ndị na-etinye ego na a oru ngo na dị nnọọ iche iwe, ụfọdụ disinterested na ndị ọzọ, ee mgbe iwu na-akwadoghị.
N'ime ọrụ ahụ enwere ebumnuche nke imekọ ihe ọnụ, ọ bụghị naanị na mmepe kamakwa na akwụkwọ, yabụ ọ bụrụ na ụlọ ọrụ nke mmepụta eserese nke ndị ọkwa ya chọrọ isonye na “akwụkwọ ntuziaka ahụ” dị mma, enwere m n'aka na Ndị ọrụ mmekọrịta ga-eji aka gị nabata gị!
Echere m na ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nke na-akwado gvSIG na-enye obere aka na ọrụ ahụ na akwụkwọ ntuziaka, nkuzi, ndọtị ma ọ bụ ihe ọ bụla, uru a ga-agbaghaghachi ngwa ngwa na obodo anyị ga-enweta ihe "ọ bụrụ na onye ọ bụla na-egwu egwu, onye ọ bụla na-emeri." Ọ bụ ọdịiche doro anya n'ihe banyere iji teknụzụ ndị azụmaahịa na nke na-eme ka ndị SL bụrụ ezigbo 'ebe obibi' nke mmepe na mmepe.
Ma dika enwere m okwu di nma, aga m etinye ya na blog m
Site na otu gvSIG, naanị anyị nwere ike ịkele gị maka ịgwa anyị ihe ọma na ihe ọjọọ ndị ọrụ na-enweta na ngwa ahụ, nke ga-enyere anyị aka imeziwanye. Daalụ!
Banyere mbipụta ahụ, obere nke nta ka a ga-eme ka ọ dịkwuo mma site na ịnweta ihe kachasị mma. Na topology amalitelarị na njedebe ikpeazụ nke mmepe, ya mere na nsụgharị n'ọdịnihu ga-abụ maka ndị niile chọrọ ya.
Maka usoro ị ga - aga, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, na weebụ "kpochapụwo" nke gvSIG (www.gvsig.gva.es) ị nwere ihe zuru oke na ngalaba akwụkwọ; Na gvSIG webụsaịtị community (www.gvsig.org), na mpaghara “nbudata na-abụghị iwu” ị nwere ike ịchọta usoro enyerela obodo aka.